Wakiilka Jorginho oo sheegay in xiddiga uu ka tagi karo kooxda Chelsea haddii… – Gool FM
Wakiilka Jorginho oo sheegay in xiddiga uu ka tagi karo kooxda Chelsea haddii…
(London) 09 Feb 2020. Wakiilka Jorginho ayaa qirtay in ciyaaryahanka khadka dhexe ee Chelsea uu ka tagi karo Garoonka Stamford Bridge xagaagan laakiin kaliya waa hadii kooxda ay muujiso inay diyaar u yihiin inay iibiyaan.
28 jirkan ayaa si joogto ah ugu ciyaaray kooxda Frank Lampard ee Chelsea xilli ciyaareedkan isaga oo u saftay 32 kulan tartamada oo dhan.
Xiddiga reer Talyaani ayaa si weyn loola xiriirinayaa inuu u dhaqaaqayo kooxda Juventus, halkaasoo uu kula midoobi doono Maurizio Sarri markii saddexaad ee xirfadiisa ah.
Wakiilka Jorginho ayaa qirtay inuu ciyaaryahanka qadka dhexe u furan tahay inuu ku biiro Juventus laakiin hadii Chelsea ay muujiso in ay diyaar u tahay in ay iska iibiso.
“Wax walba ayaa ka dhici kara suuqa kala iibsiga. Waxaan dhihi lahaa maxaa diidaya in uu Juventus ku biro, maxaa yeelay Jorginho wuxuu qandaraas seddex sano ah kula jiraa Chelsea, marka mudnanta iyaga ayaa leh, hadii uu ka tagayo waxaan qiimeyn doona July,” ayuu Joao Santos u sheegay “TuttoJuve”.
“Marka arrinkaas haddii uu dhaco, waxaan diyaar u nahay inaan tixgelinno soo jeedimaha kala duwan ee ka imaan doona Talyaaniga, Faransiiska iyo England”.
“Maxaysan macquul u aheyn in uu ku biro Juve? Iyagu waa kooxda ugu muhiimsan ee Talyaaniga, waana koox guuleysaneysay sanadihii dambe, ma dhihi karno Bianconeri kuma biiri karo”.
“Waa wax iska caadi ah, maxaa yeelay Sarri wuxuu tababare u ahaa Jorginho intii uu joogay Napoli iyo Chelsea”.
Juventus oo xaqiijisay in wadahadal qandraas kordhin ah ay kula jirto Dybala